Izinto Ukwazi Xa Driving EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Izinto Ukwazi Xa Driving EYurophu
Kunye amakhulu ezinika yimbali iimboniselo ezinkulu ukuba isukela ilanga wamanga ugu ukuba ezintabeni cavernous, IYurophu konke ngokwenene. Yeyona indawo ngogqibeleleyo ukuze uhambo wendlela, njengoko kunokwenzeka ukuba indlela yakho ukusuka kwelinye ilizwe ukuya kwelinye kumcimbi kwiiyure. Kwakhona omnye weyona mimandla ikhuselekileyo ehlabathini ukuya. Nangona ndaba ukuba EU kutshanje ayiphumelelanga ukunciphisa amazinga yokuqhuba eliyingozi, kumndilili ukufa isenguye iphantsi kade ngayo (1 ngo 49 million).
Kubalulekile ukuphawula ukuba kukho iinkqubo ezithile kunye nokuthintelwa kwindawo malunga iimoto zerenti kwaye ilizwe ngalinye iseti yayo lwemithetho ezizodwa. Yintoni kwamkelekile ngokugqibeleleyo kwelinye ilizwe (uqhuba ngaphandle umda yesantya iautobahn e Germany, umzekelo) kungangi kwenye, ngoko kuhle ukuqonda imithetho yendlela njengoko usenza indlela yakho kwilizwekazi.
Inoku engqondweni, sizilungisile ezinye iingcebiso ezisebenzisekayo ezinokukunceda uhlale ukhuselekile kwaye phakathi kweemeko yomthetho ngexesha yaseYurophu uhambo lwakho olulandelayo indlela:
1) Inshorensi Imoto Yakho
Kunyanzelekile ukuba unayo i-inshorensi kunye inshorensi ukuqhawuka ngoxa uqhuba eYurophu. Ukuba uthathe imoto yakho, kuya kufuneka uqhagamshelane wakho inkampani yeinshorensi ukuba amalungiselelo oku. Insurance kudla walutshixa kwi kwisivumelwano sakho xa uqasha imoto, leyo eyenza kube lula kancinci.
2) Zisa Izibuko spare contact lenses
Ngaba uyazi ukuba xa ufuna ukuba banxibe iilensi ezimiselweyo ngoxa uqhuba imoto umvuzo nge Spain, ungu kulindeleke ukuba benze izihlangu yesibini kunye nawe ngamaxesha onke? Amanye amazwe ngaphantsi engqongqo ngale, kodwa kububulumko ukuba ithwale ipere yesibini izibuko nawe ngamaxesha onke, ukuqinisekisa ukuba uyazazi zonke iingozi kuhambo lwakho kufuneka lokuqala yakho yoqhawulo izibuko okanye ukulahlekela.
3) Ngokucacileyo Kuphephe Ukusela And Driving
Nangona oku kusenokubonakala ngathi mazwi izicacele, ukuze uyazi kumazwe athile ukuba abe umda zero kwaphela abaqhubi ethululwayo. Oku kuthetha ukuba abaqhubi awavumelekanga ukuba naluphi na uhlobo lotywala xa konke igazi labo. I-European Commission inika ingcebiso kwi Umda standard alcohol igazi ukuba ilizwe ngalinye. e Cyprus, ikho nokubakho nxamnye nomthetho ukuze usele isiselo ethambileyo ngoxa uqhuba. Oku kungabonakala ngqongqo, kodwa kubalulekile ukuba bahloniphe imithetho yelizwe ozindwendwelayo ukuthintela naziphi na izohlwayo engalindelekanga.
4) Drive ekunene okanye ekhohlo
Ngaphandle for the United Kingdom, Ayalend, no Malta, onke amazwe aseYurophu ukuqhuba kwicala lesandla sasekunene sendlela. Kubahlali UK, oku kungenza uhlela ezifana uthethathethwano a ekhonkcwe kwisiqu kwicala counter losiba kumxholo wawakhoakulula, kuloko, ngoko ke kubalulekile ukuthatha ixesha ukuze uqhelane. Abaqhubi kufuneka kusoloko unamathele ekunene kwaye uphephe ngokuhlala imizila embindini emendweni abadibana. xa kudlula, uhlale ukhumbula ukuba ukujonga bakhulise imbonakalo Isibuko bakho.
5) Ibrashi Up Impawu Your Road
Ukuqonda iimpawu zendlela yaseYurophu kuya kukunceda kukufikisa apho uya khona yaye uza kukunceda ukuba uphephe yokwaphula umthetho. kakhulu kwiindawo European sebenzisa imiqondiso standard nokunokuthi self ecacisiweyo, kodwa umahluko bakhuliswa ifonti okanye nombala badla ukudida. Ngaphambi kokuqalisa uhambo, you might want to familiarize yourself with the iiyantlukwano ezifihlakeleyo signage endleleni kulo lonke elaseYurophu. Okungenani, oko kunceda ukuthintela ukudideka, yaye kakhulu, oko usindise ubomi bakho.
6) Qonda njani Toll Collections Umsebenzi
Amazwe athile irhafu ezihlawulelwayo ezahlukeneyo kunye neendlela toll collection. in France, umzekelo, isese yasekuhlaleni ukuze ahlawule nemali kwi emasangweni eentlawulo. Ezinye iingingqi kuya kufuna ukuba ukubonisa isincamathelisi kwi imoto yakho ukuveza ukuba uhlawule ukusebenzisa iindlela ezithile. Familiarizing kunye Ngenyanga zisebenza njani nganye yezindawo zakho yenzelwe wena uya kukunceda ukuba uphephe naziphi na izohlwayo.
7) Thatha I-Train Kunokuba Of Driving
Kulungile ukuba ngenene uyafuna ukunandipha uhambo lwakho, ukushiya kobuxhakaxhaka yokuhambisa, kwaye uthathe nje uloliwe eYurophu, wonke kweli lizwekazi ukusebenzisa kuloliwe, yaye ngokungafaniyo nakwezinye iindawo ehlabathini, kulula kakhulu ukuba bathenge amatikiti etreyini Internet sites ezifana Gcina A Isitimela, kwaye ufumana ukuhamba uze ubone uhlobo ngaphandle ukhathazeka kakhulu.
Ukulungele ukuze eYurophu? bezulu omkhethayo ukuba uqhuba okanye uthathe uloliwe, khumbula ukuba ku- Gcina A Isitimela!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Izinto ukwazi xa uqhuba eYurophu” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/things-to-know-when-driving-in-europe/ ‎– (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#yokuqhuba rail oololiwe train Travel
I work as a part time tour guide in Kent and blogs about the experience. Her favorite weekend activity is a walking tour in South West Coast of Bristol. She is also a strong advocate of sustainable lifestyle, and hopes to write a book about it someday. She lives with her parents and her Frenchie named Coco - Unako cofa apha ukuze Qhagamshelana nam